Fagaaraha ayaa la wareegay Tidal, adeegga fidinta muusikada | Androidsis
Square waxay iibsatay Tidal, adeegga socodka ee muusikiiste waalan tayada codka
Square waxay ku iibsatay Tidal $ 297 milyan inaad yeelato adeegga qulqulka muusikada oo had iyo jeer waalan si loo siiyo tayada maqalka ee ugu sarreeya ee suurtagalka ah adeegsadayaasha.
Square waa shirkad xarunteeda ganacsi udub dhexaad u tahay kuwa yaryar "POS" Waxay hubiyaan inaan ku bixinno kaamam ganacsi oo kala duwan kaarka ama loo maro qaar ka mid ah xalalka bixinta, sida Samsung Pay ama Google Pay.
Iibku wuxuu ahaa lagu sameeyay bixinta 297 milyan oo doolar ha ahaato hantida suuqa saamiyada iyo lacag caddaan ah. Sida laga soo xigtay war-saxaafadeedka, Tidal wuxuu u shaqeyn doonaa qayb gooni ah oo ka mid ah qaab dhismeedka shirkadda Square, in kasta oo aan dhammaan faahfaahinta isla iibsiga la wadaagin xilligan.
Waxyaabaha qosolka leh ee ku saabsan iibkan ayaa ah heesaaha Jay-Z, oo iibsaday shirkadda waalidka ee Tidal ee Aspiro, wuxuu ka mid noqon doonaa guddiga maamulka. Tidal illaa maanta waa barnaamij wali leh adeegsigiisa oo wali wali jira xitaa weeraradii ay fuliyeen Google, Amazon iyo Apple.
Hadda waxaan rajeynayaa in helitaanka Barxadda ay hesho xoogaa saameyn ah sidaa darteed si muhiim ah ayey u kori kartaa si ay u noqoto mid xisaabta lagu darsado marka aan go'aansanayno inaan iibsano adeegga qulqulka muusikada ee internetka.
Doolsho ay ku jirto Spotify wuxuu sii wadaa xukunkiisa kharashka ku baxaya waxa Apple Music, Amazon Music iyo xalka Google ku sameynayaan YouTube Music; xitaa hadda isku dhafan tayada Hi-Fi. Waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la arko bilaha soo socda haddii wax cusub lagu dhawaaqo oo saameyn ku yeelan kara.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Square waxay iibsatay Tidal, adeegga socodka ee muusikiiste waalan tayada codka
Sida loo dhaqaajiyo soo dejinta jadwalka Google Chrome si loo kaydiyo xogta